စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းမော်ကွန်းတိုက် - တရုတ်ထိပ်တန်း ဦး ဆောင်ဗီဒီယိုကိုမြို့ရိုးကိုစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
အရည်အသွေးမြင့်စင်မြင့်နှင့်ပတ်သက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းဗီဒီယိုနံရံ, ပြင်ပနှင့်အိမ်တွင်းငှားရမ်းခြင်းကြော်ငြာများသည်တရုတ်နိုင်ငံမှထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများမှပြသခြင်းများကို ဦး ဆောင်သည်.
မော်တော်ကား LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်သည် ပို၍ ရေပန်းစားလာသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးနောက်, LED electronic screens have become popular for the dissemination of mobile [...]
မော်တော်ယာဉ် LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင် သို့မဟုတ် တက္ကစီထိပ်တန်း ဦးဆောင်သော မျက်နှာပြင်၏ အားသာချက်များစွာ
ရောင်စုံစခရင်ပါရှိသော ယာဉ်တပ်ဆင်ထားသောစခရင်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် Iveco ကဲ့သို့သော ယာဉ်များဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည်။, [...]
ထိုရှုထောင့်များမှ LED အီလက်ထရွန်နစ် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်၏ တောက်ပမှုအညွှန်းကိန်းကို အကဲဖြတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်၏ ကြိမ်နှုန်းများ တိုးလာနေပါသည်။, the demand for operation [...]
ကွပ်ကဲမှုစင်တာရှိ LED အသေးစား pixel pitch display ၏ ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, သေးငယ်သောအကွာအဝေးပြသမှုမျက်နှာပြင်ကိုဦးဆောင်ပြီးလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။, which has the trend [...]
ပြင်ပ သာမန်မျက်စိဖြင့် 3d LED display သည် အထင်ကရ နေရာသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။
သာမန်မျက်စိဖြင့် 3D အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှု “things in the picture can not only [...]
LED အကအခင်းမျက်နှာပြင်အတွက် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု
မိုးလုံလေလုံကြမ်းပြင်အလှဆင်အဖြစ်မျက်နှာပြင်, LED dance floor video screen has been widely used [...]
အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာ ဘယ်လို ကြီးမားတဲ့ စခရင်တွေ ရှိလဲ။?
ခေတ်မီကွန်ဖရင့်အခန်းပုံစံ, ၎င်းကို အများအားဖြင့် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားသည်။. There [...]
LED display ၏ အရည်အသွေးကို မည်သည့်ကဏ္ဍများမှ သိရှိနိုင်မည်နည်း။?
LED display ငါးလုံး၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
1. မကောင်းတဲ့အချက် / သေပြီ; The dead point of LED display screen refers to [...]
မော်တော်ကား LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်သည် ပို၍ ရေပန်းစားလာသည်။ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် မော်တော်ကား LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်သည် ပို၍ ရေပန်းစားလာသည်။
မော်တော်ယာဉ် LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင် သို့မဟုတ် တက္ကစီထိပ်တန်း ဦးဆောင်သော မျက်နှာပြင်၏ အားသာချက်များစွာ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် မော်တော်ယာဉ် LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင် သို့မဟုတ် တက္ကစီထိပ်တန်း ဦးဆောင်သော မျက်နှာပြင်၏ အားသာချက်များစွာ
ထိုရှုထောင့်များမှ LED အီလက်ထရွန်နစ် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်၏ တောက်ပမှုအညွှန်းကိန်းကို အကဲဖြတ်ပါ။ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ထိုရှုထောင့်များမှ LED အီလက်ထရွန်နစ် ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်၏ တောက်ပမှုအညွှန်းကိန်းကို အကဲဖြတ်ပါ။
ကွပ်ကဲမှုစင်တာရှိ LED အသေးစား pixel pitch display ၏ ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ မှတ်ချက်များမရှိပါ အပေါ် ကွပ်ကဲမှုစင်တာရှိ LED အသေးစား pixel pitch display ၏ ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ဆေးဆိုင်များအတွက် Double Sides WIFI 4G Programmable Controller P6 Cross LED
Full Color WIFI 4G Programmable Cross LED Pharmacy Display Shop ဆိုင်းဘုတ်
စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာ Digital LED Billboard Wall P5 P6 P8 P10